Mogadishu Journal » Qaraxyo ay fuliyeen qoys ka kooban 7 ruux oo ka dhacay dalka Indonesia
Mjournal :-Qaraxyo ismiidaamin ah ayaa shalay iyo maanta ka dhacay dalka Indonesia oo ah dalka ugu badan Muslimiinta Caalamka, iyadoo weeradan lagu qaaday kaniisado ku yaalla dalkaas iyo xarun Boolis.
Weerar ismiidaamin ah oo ay fuliyeen kooxo watay Mooto ayaa subaxnimadii hore oo maanta oo Isniin ah ka dhacay xarun Boolis oo ku taal magaalada Surabaya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Indonesia.
Booliska ayaa sheegay inay tuhusan yihiin in weeraradan ay xiriir la leeyihiin weeraro is qarxin ah oo shalay lagu qaaday saddex kaniisadood oo ku taala isla magaalada Surabaya, kuwaasoo ay fuliyeen dad isku qoys ah.
Weerarkan is-miidaaminta ayaa la sheegay inay fuliyeen dad kale oo isku qoys ah ah, oo waxyaabaha qarxa ugu rakibnaa mootooyin ay wateen, kaddibna isku qarxiyay nawaaxiga xarunta booliska.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyada is-miidaaminta ee dalkaas ruxay shalay iyo maanta.
Weerarada is qarxinta ayaa waxaa fuliyay qoys ka kooban 7 xubnood oo ahaa aabe, hooyo iyo shan carruur ay dhaleen oo si koox koox ay isugu qarxiyeen saddexda kaniisadood, waxaana ku dhimatay tobaneeyo ruux.
Qoyska ka kooban 7 ruux ee fuliyay weerarka is qarxinta ayaa ka mid ahaa boqolaal qoysas ka soo jeeda Indonesia oo ka yimid Suuriya, kuwaasoo ka soo qaxay dagaaladii dalkaas ka bilowday 7 sano ka hor.
Kooxda ISIS ama Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyadda weeraradii is qarxinta ee lagu qaaday saddexda kaniisadoo maalinimadii Axada aheyd.
Indonesia ayaa caan ku ah dhaq dhaqaaqyada kooxaha xagjirka, waxaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ku soo badanayay weeraro ay bilaabeen Koox xiriir la leh Kooxda Daacish.
Sanadkii 2002-dii Jaziiradda Bali ee dalka Indonesia ayaa waxaa ka dhacay weeraro is qarxin oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa taariikhda dalkaas, waxaana jaziiradaas loo dalxiis tago lagu dila illaa 202 ruux